अष्ट्रेलियालीहरु कसरी एक अर्कालाई अभिवादन गर्छन् Absolut यात्रा
Isabel | | अष्ट्रेलिया
यदि तपाईको अर्को छुट्टीमा तपाई अष्ट्रेलियाको यात्रा लिनु चाहानुहुन्छ वा यस देशमा अध्ययन गर्न जान चाहानुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ कि जीवनमा चाँडै अनुकूल हुनका लागि त्यहाँका परम्परा र दैनिक बानीहरू छन्।
केहि नयाँ देशमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको लागि संस्कृतिमा आघात आउन सक्छ, विशेष गरी उनीहरूलाई उनीहरूको नयाँ परिवेशमा बानी परेकोले। अस्ट्रेलिया जस्तो समाजमा बस्न तपाईंले गर्न सक्ने थुप्रै चीजहरू छन्, जुन तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो अनुकूल हुन र पानीमा माछा जस्तो महसुस गर्न मद्दत गर्दछ।
मूल निवासीहरूसँग पहिलो सम्पर्कमा, या त दिशा निर्देशनहरू खोज्न वा केही प्रकारको जानकारीको लागि, तपाईंले उनीहरूलाई अभिवादन गर्नुपर्नेछ र आफैलाई परिचय दिनुपर्नेछ। यस कारणले गर्दा, हामी यस लेखमा अष्ट्रेलियालीहरूले एक अर्कालाई अभिवादन गर्ने तरिका जान्ने छौं।
1 अस्ट्रेलियालीहरु कस्ता हुन्?
2 अष्ट्रेलियामा अभिवादन कस्तो छ?
3 अष्ट्रेलियामा कुन सूत्रहरू स्वागत गर्न प्रयोग गरिन्छ?
4 प्रस्तुतिहरू कस्तो छ?
5 अष्ट्रेलियालीहरू कसरी भोजमा एक अर्कालाई अभिवादन गर्छन्?
6 राष्ट्रमंडल देशहरूमा अभिवादन गर्न अन्य तरिकाहरू
अस्ट्रेलियालीहरु कस्ता हुन्?
"Aussies" पनि भनिन्छ अष्ट्रेलियालीहरु उनीहरुको व्यवहारमा सामान्यतया सौहार्दपूर्ण, ईमान्दार, रमणीय र अनौपचारिक हुन्छन्। उनीहरूले राम्रो शैक्षिक स्तरको आनन्द लिन्छन्, जसले पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू र जीवनको उच्च गुणस्तरमा अनुवाद गर्दछ। उत्तरार्द्ध उनीहरूको मैत्री, खुला र आरामदायक चरित्रमा झल्किन्छ।
अष्ट्रेलियाली साधारण व्यक्ति हुन् जसले सामाजिक वर्ग बीचको भिन्नता बिना प्रयास र कडा परिश्रमको उच्च महत्त्व राख्छन्। तिनीहरू खुला मन, अन्य संस्कृतिहरूप्रति सम्मान र विदेशीहरूप्रति उनीहरूको आतिथ्यले चित्रण गर्दछन्। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, अष्ट्रेलियालीहरू न्यानो, घनिष्ठ र मैत्री मानिसहरू हुन्।
अष्ट्रेलियामा अभिवादन कस्तो छ?
अष्ट्रेलियामा कसरी अभिवादन छ भन्ने बारेमा कुरा गर्दा, हामीले कुराकानी सुरु हुने मुठभेडको सन्दर्भलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। अर्को शब्दमा, अनौपचारिक परिवार वा साथीहरू भेला हुने अधिक औपचारिक काम सभा जस्तो छैन।
उदाहरण को लागी, मित्रहरु बीच अष्ट्रेलियालीहरु एक अर्कालाई मायालु तरिकामा अभिवादन गर्छन्: गाला मा चुम्बन वा एक छोटो अंगाला साथ। अब यो व्यापार हो वा विश्वविद्यालय बैठक, अष्ट्रेलियालीहरूले एक अर्कालाई नम्रता र औपचारिक रूपमा एक छोटो ह्यान्डशेक र मुस्कानका साथ स्वागत गर्छन्।
अष्ट्रेलियाली चलन अनुसार र अन्य धेरै देशहरुमा, बधाई भेटको सुरु र अन्तमा गर्नुपर्दछ, साथै कुनै पनि पाहुनाहरु जो बैठकमा आउँदछन्।
थप रूपमा, अष्ट्रेलियालीहरूले प्रायः अन्य मानिसहरूलाई उनीहरूको नाम प्रयोग गरेर सम्बोधन गर्दछन् पहिलो बैठकमा पनि ताकि यो महत्वपूर्ण छ कि तपाईंले आफ्नो वार्तालापहरूको नाम सम्झनु पर्छ जब तिनीहरू तपाईंलाई परिचय गराउँछन्। आँखा सम्पर्क गर्न पनि आवश्यक छ जब तपाईं अर्को व्यक्तिलाई अभिवादन गर्दै हुनुहुन्छ। यो सम्मानको चिह्न हो र यसले अन्य व्यक्तिले के भनिरहेको छ तपाईंले ध्यान दिएर सुन्नुभयो र ध्यान दिईरहेछ भन्ने पनि संकेत गर्दछ।
अष्ट्रेलियामा कुन सूत्रहरू स्वागत गर्न प्रयोग गरिन्छ?
G'day: "गुड डे" को संक्षिप्त रूप एक अर्कालाई अभिवादनको लागि सबै भन्दा सामान्य र अनौपचारिक सूत्र हो र "गिड्डे" भनेर उच्चारण गरिन्छ। यो दिन र रात दुबैको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
"ओवा या गो माइन?": यो प्रख्यात संक्षिप्त सूत्र हो "तपाई कसरी जीवनसाथी जाँदै हुनुहुन्छ?" यसको मतलब तपाई कस्तो हुनुहुन्छ।
"Cheerio": अलविदा भन्न प्रयोग गरियो।
"क्या यो आर्भो": तपाईले देख्नुहुने जस्तै, अष्ट्रेलियाली शब्दहरू संक्षिप्त गर्न मन पराउँछन्। यो सूत्रको अर्थ "आज दिउँसो भेटौंला"। तिनीहरू अभिव्यक्ति एरभो प्रयोग गर्दछ सबै अवस्थामा दिउँसो सन्दर्भ गर्न।
"Hoooo": यसको मतलब पछि तपाईलाई भेट्नु हुन्छ।
"Toodle-oo": अलविदा भन्न अर्को तरीका।
"शुभ प्रभात शुभ प्रभात।
"शुभ दिउँसो": शुभ दिउँसो।
"शुभ साँझ": शुभ साँझ।
"शुभ रात्री शुभ रात्री।
"तपाईंलाई भेटेर खुसी लाग्यो": तपाईंलाई भेटेर खुसी लाग्यो।
"तपाईंलाई देखेर राम्रो लाग्यो": तपाईंलाई देखेर खुशी लाग्यो।
प्रस्तुतिहरू कस्तो छ?
जब पुरुष र महिला दुबैलाई औपचारिक प्रस in्गमा प्रस्तुत गर्ने कुरा आउँदछ, "Señor", "Señora" र "Señorita" अभिव्यक्ति "श्री", "श्रीमती" भइरहेको छ। र "मिस" अंग्रेजीमा उनीहरूको सम्बन्धित अभिव्यक्ति।
यदि यो साथीहरूको समूहको बीचमा अनौपचारिक प्रस्तुतीकरण हो भने, "यो मेरो साथी पीटर हो" (उनी मेरो साथी पीटर हुन्) वा "यो मेरो सहकर्मी अन्ना हो" (उनी आना हुन्, मेरो सहकर्मी) जस्ता अभिव्यक्तिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। ।
अष्ट्रेलियालीहरू कसरी भोजमा एक अर्कालाई अभिवादन गर्छन्?
तपाईं कुनै पनि सूत्रहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन मैले अघिल्लो अनुच्छेदहरूमा सूचित गरें। यद्यपि यो कुरा मनमा राख्नुपर्दछ कि यदि तपाइँलाई भोज वा बार्बेक्युमा आमन्त्रित गरियो भने तपाइँले समूह र तपाइँको आफ्नै रमाइलोको लागि केही पिउन (उदाहरण बियर, वाइन वा शीतल पेय) ल्याउने प्रचलन छ।
साथै, अष्ट्रेलियामा पार्टीको होस्टलाई उनीहरूसँग सम्पर्क राख्नु राम्रो आनीबानी मानिन्छ कि उनीहरूले तपाईंलाई अरू केही ल्याउन चाहे वा चाहानुन्। अर्कोतर्फ, यदि तपाईंलाई कसैको घरमा खाना खान आमन्त्रित गरिएको छ भने, तपाईं आइपुग्दा पाहुनालाई उपहार ल्याउने चलन छ, जस्तै फूलको गुलदस्ता, चकलेटको बक्स वा वाइनको बोतल।
राष्ट्रमंडल देशहरूमा अभिवादन गर्न अन्य तरिकाहरू
राष्ट्रमंडल सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको साथ पचास भन्दा बढी देशहरूको एक स्वैच्छिक संस्था हो, तीमध्ये धेरैजसो अंग्रेजी आधिकारिक भाषा हो।
यद्यपि प्रत्येक देशको आफ्नै राजनीतिक प्रणाली छ र स्वतन्त्र छ, अस्ट्रेलिया वा क्यानाडा जस्ता केहीले बेलायती राजतन्त्रसँग सम्बन्ध कायम राख्छ। त्यसोभए तपाइँ कनाडा वा इ England्ल्याण्ड जस्ता राष्ट्रमंडल सदस्य देशहरूमा कसरी अभिवादन गर्नुहुन्छ?
क्यानाडाइयनहरू संसारका मित्रतापूर्ण व्यक्तिहरू हुन्, जसले अरूसँग कुराकानी गर्न प्रयोग गर्ने अभिवादनहरूमा अनुवाद गर्दछन्।
उदाहरण को लागी, क्युबेकमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने अभिवादन "Bonjour" र "va va?" जबकि मेरिटाइममा व्यक्तिहरूले एक अर्कालाई साधारण "हेलो" वा "हाई" को साथ अभिवादन गरे पछि मैत्री "हाउ या''इन?" अर्कोतर्फ, ओन्टारियो र टोरन्टोले पनि यस्तै सूत्रहरू प्रयोग गर्दछन्।
यो भनिन्छ कि अल्बर्टा र सास्काचेवान देशका मित्रता भएका व्यक्तिहरू हुन् र तपाईं मानिसहरूले जहिले पनि ठूला शहरहरूमा कुराकानी गर्न इच्छुक मानिसहरू पाउनुहुनेछ जहाँ मानिसहरूले प्राय: हतार गर्दछन्।
सब भन्दा साधारण तरिका जुन अ English्ग्रेजीले एक अर्कालाई अभिवादन गर्न प्रयोग गर्दछ हात मिलाउनु हो र यसलाई व्यवहारमा राख्नु सामान्य छ जब कसैलाई अर्का व्यक्तिसँग परिचय गराईन्छ वा व्यापारको दुनियामा बैठक सुरु गर्नु अघि।
सामान्यतया एउटा गालामा चुम्बन लिएर मात्र अभिवादन गर्दछ जब वार्तालाप साथीहरू वा परिचित हुन्छन् र तिनीहरू बीच स्नेह हुन्छ। स्पेन जस्ता देशहरू जस्तो नभई, चुम्बनले अभिवादन गर्नु सबै भन्दा साधारण कुरा होईन।
अभिवादन गर्न अन्य तरिकाहरू:
"नमस्कार वा नमस्ते": यसको मतलब "हेलो" हो।
"तपाईं कसरी गर्नुहुन्छ?": यसको मतलब यो हुन्छ तपाईं कसरी हुनुहुन्छ र साधारणतया औपचारिक प्रस in्गहरूमा भनिन्छ जुन ह्यान्डशेकको साथ हुन्छ।
"तपाई कस्तो हुनुहुन्छ?": यसको अर्थ "तपाई कस्तो हुनुहुन्छ" भन्ने पनि हुन्छ तर अधिक अनौपचारिक अवस्थामा प्रयोग हुन्छ। सामान्यतया "म ठीक छु धन्यवाद, र तपाई" को साथ उत्तर दिइन्छ। जसको मतलब "म ठीक छु, धन्यवाद, र तपाई?"
"तपाईंलाई भेट्दा राम्रो लाग्यो": यो वाक्यांशको अर्थ "तपाईंलाई भेटेर राम्रो लाग्छ" र हात मिलाउँदा प्रायः बोल्दछ। यो सामान्यतया "तपाईंलाई पनि भेटेर राम्रो लाग्छ" भन्ने जवाफ दिईन्छ (तिमीलाई पनि भेटेर राम्रो लाग्छ) र हात मिलाउँदा प्रायः भनिन्छ।
You तपाईलाई भेट्दा खुशी लाग्यो express: यो अर्को सूत्र हो कि कसैले अर्कालाई भेट्न खुशी लाग्यो। उत्तर दिनको लागि, "पनि" वाक्यको अन्त्यमा जोडिएको छ अघिल्लो केसमा जस्तै।
सागर देशमा तपाईंको भविष्यका बैठकहरूमा यी सानो सुझावहरू प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईं साँचो "अस्सी" जस्तो अभिवादन गर्नुहुनेछ!
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » अष्ट्रेलियालीहरु कसरी एक अर्कालाई अभिवादन गर्छन्
ती carepenis एक समलिङ्गी जस्तै प्रत्येक अन्य अभिवादन र कुखुरा पुरुष र बदबूदार मजाक महिला र हाँस समलिङ्गी चूसना र आफ्नो गधा र स्तन shitdddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa को अन्त समातेर Masturbating 3000 घण्टा आफ्नो गधा औंला र
स्टीभनलाई जवाफ दिनुहोस्